ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLatvia IsiLithuania IsiLozi IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPangasinan IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiXhosa IsiZulu
Ngaphezu kwengcindezi esibhekene nayo evela kubadayisi, imizwa nemikhuba yethu ingaba nomthelela ekuthengeni ngokweqile. Nakhu ukusikisela okuyisithupha kokukusiza ulawule indlela othenga ngayo.
Ungathengi ngokuxhamazela. Ingabe uyakujabulela ukuthenga nokuthola izinto sezinamanani aphansi? Uma kunjalo, ungase uthambekele ekuthengeni ngokuxhamazela. Ukuze ugweme lokho, yima kancane bese ucabangisisa ngemiphumela yesikhathi eside yokuthenga, eyokuba naleyo nto ohlela ukuyithenga neyokuyinakekela. Yima bese ucabanga ngesikhathi esidlule lapho wathenga khona ngokuxhamazela wabe usuzisola kamuva. Ake “wehlise umoya” uqale ucabange ngaphambi kokwenza isinqumo sokugcina.
Gwema ukuthenga ukuze nje uzizwe kangcono. Ukuthenga kungakwenza uzizwe kangcono okwesikhashana uma ukade uphatheke kabi. Kodwa lapho imizwa ebuhlungu ibuya, ungase ucindezeleke nakakhulu uze ufune ukuyiqeda ngokuthenga. Kunokuthenga ukuze nje uzizwe kangcono, thola abangane abazokusekela noma wenze okuthile okuvivinya umzimba, njengokuhambahamba.
Ungathengi ngenjongo yokuzilibazisa nje. Inxanxathela yezitolo ezibizayo iye yashintsha ukuthenga kwaba into yokuzijabulisa. Nakuba ungase uye enxanxatheleni yezitolo noma ubheka-bheke kuyi-Internet ukuze nje uzijabulise, okuningi kwalokho okubonayo kulungiselelwe ukuba kuvuse isifiso sokuthenga kuwe. Thenga kuphela lapho kunokuthile okufunayo, futhi ugcine ngakho.
Khetha abangane bakho ngokucophelela. Indlela yokuphila nezingxoxo zabangane bakho kunethonya elikhulu ezifisweni zakho. Uma kuwukuthi uthenga ngokweqile ukuze ufane nabangane bakho, khetha abangane abangayithandi kakhulu imali nezinto ezibonakalayo.
Wasebenzise ngokuhlakanipha amakhadi okuthenga ngesikweletu. Amakhadi okuthenga ngesikweletu enza kube lula ukuthenga ngaphandle kokucabanga ngemiphumela. Zama ukuyikhokha yonke imali yenyanga ngayinye yamakhadi okuthenga ngesikweletu. Yazi inzalo nezindleko zekhadi lakho lokuthenga ngesikweletu, futhi uqhathanise izinzuzo zamakhadi ahlukahlukene ukuze uthole elingabizi kakhulu. Xwaya amakhadi ezimali ezinkulu ahambisana nezindleko ezinkulu zokuboleka futhi anezinzuzo ongazidingi. Kunokuthenga ngesikweletu, qongelela imali lapho ufuna ukuthenga into enkulu bese uyithenga ngokheshe.
Sazi isimo sakho sezimali. Kulula ukuthenga ngokweqile uma ungazi ukuthi umi kanjani ngasezimalini. Hlale unemininingwane yamuva yezimali zakho, futhi uyazi ingqikithi yemali onayo. Yenza uhlelo lokuthenga lwanyanga zonke kuye ngemali oyitholayo nezindleko zesikhathi esidlule. Bhekisisa indlela othenga ngayo futhi uyiqhathanise nohlelo lwakho. Cela umngane omethembayo ukuba akusize uqonde izinto eziphathelene nezimali wena ongazijwayele.
Ukuvikela Izingane Ekuthengeni Ngokweqile
Izingane yizo eziyizisulu ngokukhethekile zabakhangisi futhi lokho kuyaqondakala. Intsha ithenga kakhulu kunanini ngaphambili. E-United States, intsha ichitha izigidigidi zamarandi ngonyaka ithenga.
Nokho, umcwaningi uJuliet Schor uthi izingane ezithenga ngokweqile zisengozini yokucindezeleka nokukhathazeka futhi azinabo ubuhlobo obuhle nabazali bazo. Ungazivikela kanjani izingane zakho? Cabangela izindlela ezingokoqobo abanye abazali abaye bazivikela ngazo izingane zabo.
ZIFUNDISE: “Awunakuzivikela ngokuphelele izingane zakho ezikhangisweni ngoba zigcwele yonke indawo. Ngakho, siyawachazela amadodakazi ethu ukuthi abakhangisi bangamagovu nokuthi izinkampani ezibaqashayo zimane nje zifuna imali. Azinamsebenzi nathi.”—UJames noJessica.
UNGAVUMI ZIKULAWULE: “Izingane ziyakucindezela ukuba uzithengele izinto futhi zizama konke ukuze ugcine uvumile. Kodwa kubalulekile ukuba wenqabe. Ngokuhamba kwesikhathi ziyafunda ukuthi ngeke zithole yonke into. Njengoba sasikhulisa indodakazi yethu, sasihlale sixoxa njengabazali ngendlela yokulinganisela nemingcele okumelwe siyibeke.”—UScott noKelli.
ZIVIKELE EZIKHANGISWENI: “Umkhaya wethu awuyibuki kangako ithelevishini. Ayiyona nje into yethu. Isikhathi ebesingasisebenzisela ukubuka ithelevishini sisisebenzisela ukwenza ezinye izinto. Siyapheka futhi sidle ndawonye, kanti abafana bethu bayazifela ngokufunda.”—UJohn noJenniffer.
Thumelela Thumelela Ukulawula Indlela Othenga Ngayo